Share Flash ngosi mmịfe Online - ngosi mmịfe maka Blogger
> Resource> Atụmatụ> Share Flash ngosi mmịfe Online - ngosi mmịfe maka Blogger
Ka n'ịghagbu otú akwalite gị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ? Taa, mmadụ mgbasa ozi weebụsaịtị na-ngwa ngwa ịghọ oké nyiwe netwọk na azụmahịa ọkachamara! An ịgba profaịlụ peeji ma ọ bụ Blog na online flash ngosi mmịfe ga-akpa enyere gị aka ịghọta nza nke eyeballs si tọn ọbịa na-adọta dị ka kpọrọ ndị mmadụ n'otu n'otu na-esonụ ebe.
A nkuzi ga-bụ-eduzi gị otú bulite flash thumbnail foto gallery weebụ na embed ya Google Blogger post, mee ka gị na blog ọzọ mara mma na dị nnọọ mfe nzọụkwụ. Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe Ga-eji. Download ya maka free ikpe.
1 Mee Flash Photo ngosi mmịfe
Ẹkedori flash ngosi mmịfe onye na-eme ka a flash foto ngosi mmịfe, mgbe ahụ, ịdọrọ na dobe foto gị (na videos) na flash ngosi mmịfe eme software.
2 Họrọ ọkacha mmasị gị 2D ma ọ bụ 3D ngosi mmịfe template
Họrọ ọkacha mmasị gị 2D ma ọ bụ 3D ngosi mmịfe template si ọtụtụ. E nwere ụyọkọ nke pụtara ngosi mmịfe ndebiri nke ị nwere ike họrọ na-eme ka gị onwe gị na egwu flash ngosi mmịfe. Lee ihe flash ngosi mmịfe ndebiri.
3 Save na bulite Flash Photo ngosi mmịfe ka Web
Iji mee ka ihe online flash ngosi mmịfe, ị na-enyere ụfọdụ dị mmepụta nhọrọ ebe a, pịa Asuanetop button, mgbe ahụ:
Pịa Chekwa bọtịnụ ịzọpụta gị flash ngosi mmịfe na HTML, XML, SWF na ndị ọzọ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-azọpụta na ọrụ gị dị swf faịlụ, ị nwere ike n'otu ntabi bulite ya YouTube mgbe ahụ idetuo na mado na Embed koodu na gị blog; ma ọ bụ i nwekwara ike ịzọpụta ya dị ka HTML faịlụ na ị ga-nyere ụfọdụ HTML koodu nke ị nwere ike ozugbo idetuo na mado na gị blog.
I nwekwara ike pịa FTP bulite Flash SWF faịlụ ka weebụ ọ bụla Bochum. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a web usu, ị nwere ike bulite gị flash faịlụ ka Google Sites, na-URL adreesị nke Flash SWF faịlụ.
Ọzọ Atụmatụ banyere ebugote flash foto ngosi mmịfe online
Bulite web foto gallery ka Google Sites
Open http://sites.google.com/, gị banye Gmail akaụntụ. Ego nhọrọ "M na-ekweta na okwu ndị bụ", pịa bọtịnụ "Adị m njikere ike m peeji nke" n'okpuru, na nbanye.
Pịa "Họrọ File" button na ala, mgbe ahụ, na-agagharị na họrọ Flash SWf faịlụ na mpaghara gị diski ike, bulite ya.
Ugbu a, uploaded flash foto ngosi mmịfe ga-edepụtara ke "Mgbakwụnye".
Ugbu a, ị uploaded Flash SWF faịlụ ka Google Page, mgbe ahụ, ị ​​ga-URL adreesị nke online flash ngosi mmịfe ma rịba ama ya. Iji nweta SWF flash URL adreesị, i nwere ike imeghe uploaded flash ngosi mmịfe na idetuo URL adreesị nchọgharị na weebụ adreesị mmanya. The njikọ okwu kwesịrị anya yiri: http://sites.google.com/site/wondersharefamily/Home/index.swf.
Embed Flash Photo ngosi mmịfe ka Blogger
Ikpeazụ nzọụkwụ bụ embed flash ngosi mmịfe gị Blogger post. Emeghe gị blogger nchịkọta akụkọ, ịgbanwee gaa na "Dezie HTML" mode, wee tinye ndị na-esonụ koodu ọ bụla nke ngalaba na gị blogger post.
<Ihe classid = "clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,45, 0 "obosara =" 150 "elu =" 150 "> <param aha =" nkiri "uru =" http://sites.google.com/site/wondersharefamily/Home/index.swf "/> <param aha =" àgwà "uru =" elu "/> <param aha =" menu "uru =" ụgha "/> <Embed src =" http://sites.google.com/site/wondersharefamily/Home/index.swf "àgwà = "akwa" pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" ụdị = "ngwa / x- Shockwave -flash" obosara = "150" elu = "150"> </ Embed> </ jụrụ>
Biko dochie Red URL na koodu ka gị onwe gị URL na ịtọ gị onwe gị akụkụ nke Flash SWF faịlụ. Na nke a, na URL adreesị bụ http://sites.google.com/site/wondersharefamily/Home/index.swf. Mgbe azọpụta, na-ele Blogger post iji jide n'aka na flash ngosi mmịfe maka Blogger arụ ọrụ nke ọma. Bụrụ na ọ bụghị, na-aga azụ gị blogger post dezie HTML koodu.
N'otu aka ahụ, i nwere ike idetuo na mado n'elu koodu gị website, ọzọ blọọgụ ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ị chọrọ ogologo oge dị ka ọ na-akwado HTML codings. Mgbe ahụ-agụgharị red Koodu ka gị onwe gị URL na ngosi mmịfe size, na ọ ga-eme.
Best Photo ngosi mmịfe Onye kere: Olee ka a Photo ngosi mmịfe
Ourpix ngosi mmịfe Software
New Year Song Aro Maka ngosi mmịfe
Wedding Song List - Wedding Songs maka ememme, N'ikuku na Dance
Olee otú Mee a ngosi mmịfe na Pan / Zoom Mmetụta
Baby ebe nchekwa Book Ideas: All banyere mbụ milestones
Mee ka a Quiz na PowerPoint, PowerPoint Quiz Onye kere ma ọ bụ QuizCreator
Olee otú Mee a iPhoto ngosi mmịfe na na na Apple TV